China Inoraswa Inobvisa Bhegi Fekitori uye vatengesi Bornsun
kufashukira kudzivirirwa. Sefa inovhara suction otomatiki kana zvasvika pakusangana nemvura. Serial port inokutendera kuti uwedzere kukweva kugona kusvika pamalita masere Mabhegi akapetwa nematepi anoita kuisa nekukurumidza uye nyore. Iyo solidifier, yakarongedzwa mumasaga akasungunuka, inotangirwa-kuiswa muhomwe kuitira kuti utange kuvhiya ipapo ipapo. Kuyera mukombe wekubatanidza poindi. Mushure mekushandisa, ingobata mubato uye bvisa bhegi. Mushure mekuvhara, makapeti ese anogara akavharwa akasimba uye chengetedza bhegi rakanamwa zvachose kunyangwe rakadonhedzwa pasi.
Iyo inosimbisa mumiririri ino chengetedza kubata kwakachengetedzeka kwemarara emvura, ichideredza njodzi yekuparara kana kusangana neanogona kutapukira marara emvura.
Mune serial yekubatanidza, unogona kubatanidza kusvika kumana canister muketani imwechete. Kana Vheji yekuchinja ikashandiswa kubatanidza maketani maviri, iwo huwandu hwekuunganidza huwandu i8 litita pane imwe trolley. Paunenge uchishandisa Bornsun Suction mabhegi akateedzana, mvura inoyerera ichipinda mubhegi rekutanga. Kana kamwe bhegi rekutanga razara, mvura yacho inotanga kuyerera ichipinda mubhegi rinotevera kuburikidza neSirii Tubing pasina chero mushandisi anopindira. Kana bhegi rekupedzisira muketani kana nhevedzano razara kana kana maitiro apera, mabhegi acho anovharirwa nekurasa sezvinoita mukushandisa chaiko.
Ruvara: Grey kana yakagadzirirwa
Certification Yemhando: CE, ISO 13485
Pashure: Kubvisa Canister
Zvadaro: Disposable kubvisa Suction B
Ruma Kuchengeta Rudzi